Guriga Lego oo ah guriga cajiibka ah ee deenishka ee Lego global | Abuurista khadka tooska ah
Lego House waa guryo deenish ah oo cajiib ah oo ka mid ah Lego global
Lego Aqalka la guri yaab leh lego taasi waxay maamushaa inay naga tagto anaga oo layaaban inaan ka fikirno sida hal abuur sare laga bilaabo wax fudud sida Lego. Qof kasta oo nolosheena ka mid ah wuxuu ku ciyaaray qurubyadan yaryar ee balaastigga ah ee aan ku kari karnay dhisaan qalcado iyo jidad kala cayn kasta ah, male ayaa ahaa waxa kaliya ee muhiimka ah oo aan ruux dhise shidaalkeena.
Hadaad (ama) tahay Lego jecel ma seegi kartid Lego Aqalka, hadaad booqato Denmark Waa inay noqotaa mid ka mid ah joogsiyadaada muhiimka ah maxaa yeelay ma awoodi doontid inaad la kulanto khibraddan meel kale oo aan ka ahayn Danmark. Deenishku had iyo jeer waxay nagu la yaabaan waxyaabo badan oo nooc ah waana tan kale oo ka mid ah cajaa'ibka badan ee ay adduunka u abuureen.
Mashruucan waxaa soo diyaariyay istuudiyaha naqshadaha BIG, a Mashruuc cusub, indho qabad badan oo aad u jecel dhamaan Lego toy-ga jecel. Waa mashruuc ka mid ah dhismaha magaalada taasi waxay dooneysaa inay si uun uga tarjunto nuxurka ciyaarta caanka ah mid gaar ah oo aan la ilaawi karin.
Dhismuhu wuxuu u eg yahay dibedda 21 leben Lego leesku waafajiyoSida haddii ay ahayd ciyaarta Lego lafteeda, marka laga eego aragtida guud ee hawada waxaan arki karnaa nuxurka astaanta. Adeegsiga midabka iyo qaababka leh taabashada waxqabadka ayaa maareeya inay muujiyaan shaqo aan kaliya ahayn soo jiidasho leh dadka jecel ciyaartaas laakiin dhammaan kuwa jecel naqshadaha casriga ah.
Gudaha Lego Aqalka Waan arki karnaa dhammaan noocyada kala duwan ee walxaha lagu dhisay shaxdan: dinosaurs, dhirta, geedaha iyo nooc kasta oo shax ah ayaa soo ifbaxaya mahadnaq kuwaas aawadood gogo 'Lego gogo' Afar qol oo kala duwan oo ciyaarta ka mid ah ayaa ku daryeeli doona kuma caajisin karno hal ilbiriqsi, markaan caajisanayno oo gaajaysan nahay waa inaanan ka walwalin maxaa yeelay Lego Aqalka waxay leedahay maqaayado badan oo gudaha ah, Ma noqon doontaa cuntada Lego? - Shaqsi ahaan waxaan rajeynayaa sidaas xitaa haddii ay tahay inaan cuntada ka qaadno guriga hehe.
Haddii aan rabno inaan wax badan ka ogaanno shirkadda, waxaan sameyn karnaa mahadsanid taxane ah bandhigyo halkaas oo ay nooga sheegi doonaan dhammaan taariikhda la xiriirta koonkan xabbad caag ah.
Waxaan arki karnaa fiidiyoow yar oo ay ku tusayaan qaybo kala duwan oo tan ah farshaxan Lego la yaab leh oo hal abuur leh.
Haddii aad dooneysay inaad aragto Lego badan waxaad arki kartaa fiidiyowgaan halka ay na tusayaan dhismayaal cajiib ah oo lagu sameeyay Lego.
Heer waxbarasho iyo hal abuur, waxaan shaki ku jirin in noocan caruurtu ku ciyaaraan waxay noo ogolaanaysaa inaan horumarinno mala-awaalkeenna hab gebi ahaanba bilaash ah iyada oo aan loo baahnayn tilmaamo nagu hagaya safarkayaga yar markaan ciyaareyno ilmo. La soo bax ruuxa hal-abuurka ah ee aad gudaha ku sidato!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Lego House waa guryo deenish ah oo cajiib ah oo ka mid ah Lego global
Adele, ama sida loo sahaminayo nidaamyada naqshadeynta shirkadaha ugu sareeya